यातायात व्यवसायीको मनोमानी : पाँच किलोमिटरको भाडा १३० रुपैयाँ !
म्याग्दी- बेनीको महारानी थानदेखि बेनी नगरपालिका–४ डाँडाखेत जोड्ने सडकमा यातायात सेवा दिने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेका छन् ।
सो सडकमा प्रतिकिलोमिटर रु १५ का दरले भाडादर कायम भएको थियो तर उनीहरूले पाँच किलोमिटर दूरीको फुर्केसल्लासम्म यात्रा गरेको १३० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले बढी भाडा असुलेको गुनासोका बारेमा उपभोक्ताले लिखित उजुरी गरेको बताए ।
वडा अध्यक्ष पौडेलले बेनीदेखि डाँडाखेत जोड्ने सडकमा १०० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति भाडा कायम भएकोमा आफैंलाई समेत व्यवसायीले १३० लिएको बताए । बेनी–दरवाङ सडकको बेनीदेखि ठूलोखोलासम्मको विकल्प मानिएको यो सडकबाट बेनी नगरपालिका–४, ५ र ६ का बासिन्दाले सेवा लिँदै आएका छन् । यस क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास छ । पछिल्लो केही वर्षयता यो सडकलाई करोडौं रकम खर्चेर स्तरोन्नति पनि गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायी बानियाँले डिजेलको मूल्य बढेको र कच्ची सडक भएसँगै गाडीको इञ्जिन बिग्रने, मर्मत खर्च बढी लाग्ने भएकाले आफूहरूले भाडा बढाएको प्रतिक्रिया दिए । गाडीमा नचढ्ने मोटरसाइकल भएकाले स्थानीयलाई आफूहरूका विरुद्ध उचालेको उनको भनाइ छ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले लिखित रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको विषयमा उजुरी नआएको र त्यस्तो सूचना पाएमा कारवाही गरिने बताए । म्याग्दीका अन्य ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारी साधनहरूले पनि मनोमानी हिसाबले तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको जनगुनासो छ ।
बलात्कार गरेको कसुरमा जोगीलाई सात वर्ष कैद सजाय
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्र कल्याणको सङ्कल्पसहित विशेष पूजा
डा. राजीवलाई सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय पदक